:: My Little World ::: February 2010
Weekend - Kdrama
ပျင်းနေတယ်၊ အချိန်ရတယ်ဆို ကြည့်ဖို့ကိုရီးယား ဒရမ်မာ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ။ ကြည့်မယ်ဆို စိတ်ရှည်ဖို့ တော့ လိုမယ်။ အကုန်လုံးက လက်ရှိ ထုတ်လွှင့်နေဆဲ ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေကြီးပဲဆိုတော့ တထိုင်ထည်း အပြီး ကြည့်လို့ မရဘူး။ တကယ်ဆို အင်တာနက်ပေါ်က ကြည့်မယ်ဆို ခုလိုအချိန်မျိုး ကြည့်တာ အကောင်းဆုံး ပါပဲ၊ နောက်ကြာမှဆို ဟုိုလင့်ကကြည့်မရ ဒီလင့်ကပျက်နဲ့အဆင်မပြေဘူး။
Stars Falling From The Sky (Wish UponaStar)
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲ စကြည့်တုန်းက မင်းသမီးက ပြာယာခပ်နေတာကြည့်ပြီး သိပ်မကြိုက်ဘူး။ နောက်ပိုင်းတော့ သဘောကျလာတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ ပါတဲ့ ကလေး ၅ယောက် သရုပ်ဆောင်တာကြည့်ရတာ ရီရတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ကြည့်လို့ ကောင်းတယ်။ အပိုင်း ၂၀ ရှိတာ အခု ၁၄ ပိုင်းပြပြီးပြီ။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကုို Viikii ကနေ ကြည့်ဖြစ်တယ်။ Viikii က တင်တာမြန်တယ် ဆိုတော့ တနင်္လာနဲ့အင်္ဂါမှာ ကုိုရီးယားမှာပြလိုက်တဲ့ အပိုင်းတွေရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးကို ကြာသာပတေးလောက်ဆို အင်တာနက်ပေါ်မှာ ကြည့်လို့ ရနေပြီ။
Stars Falling From The Sky (ViiKii)
ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို တခြားနေရာမှာ ကြည့်ရတာထက်စာရင် Viikii က ကြည့်ရတာကို သဘောပိုကျတယ်။ ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ သူများတွေ ရေးထားတဲ့ ကွန်မန့် တွေ့ကို ဖတ်ရတာ တခါတလေ ပုိုရီရတယ်။
The Woman Who Still Wants To Marry (Still, Marry Me)
ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ လူပြောများလုို့ကြည့်ဖြစ်တာ။ တကယ်ကြည့်တော့ အဲဒီထဲက မင်းသမီး ၃ ယောက်လုံး သရုပ်ဆောင်တာကို သဘောကျတယ်။ သူတို့ ကိုကြည့်ပြီး ရီနေရတယ်။ အမှန်ပြောရရင် ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ကြည့်ရင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရီရတဲ့ အခန်းမျိုးပဲ သေချာကြည့်တယ်။ ဘာမှန်းမသိ ရှုပ်ရှက်ခပ်တဲ့ အပိုင်းမျိုးရောက်လာရင် ကျော်ကြည့်လိုက်တယ်။ အေးရော။
The Woman Who Still Wants To Marry (DramaSub)
ဒီဇာတ်လမ်းကို ViiKii ကနေကြည့်လို့မရဘူး။ စင်္ကာပူကဆို Viikii မှာ "Translator only in your area" လို့ ပေါ်နေတဲ့ အတွက် DramaSub ကနေ ပြီးကြည့်တယ်။ ၁၆ ပိုင်းရှိတာ အခု ၁၂ ပိုင်းအထိ ပြပြီးပြီ။
နောက်တစ်ကားက Pasta ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်း။ အဓိက ဇာတ်ဆောင်မင်းသားကို အရင် Coffee Prince မှာ ကြည့်ဖူးထဲက မကြိုက်ဘူး။ စိတ်ထဲ သူ့ ကိုကြည့်ရတာ နွဲ့ နေသလိုပဲ။ အထူးသဖြင့် လမ်းလျှောက်ရင်။ မင်းသမီးကလည်း အရမ်း မချောပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မင်းသမီး သရုပ်ဆောင်တာကို သဘောကျတယ်။ အဓိက စွဲဆောင်နုိုင်တာက မီးဖုိုချောင်၊ Chefs တွေ အစားအသောက် ပြင်ဆင် ချက်ပြုတ်တာတွေ ကြည့်ရတာ သဘောကျတယ်။ ဒါမျိုး အပြင်မှာ မြင်ခွင့်မရနိုင်လို့ ကြည့်ဖြစ်တယ်။
ဒါလည်း ViiKii မှာ ကြည့်လို့ မရလို့Dramasub ကနေပြီး ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းကြည့်ဖြစ်တိုင်း၊ ဇာတ်လမ်းထဲက Pasta ပွဲတွေတွေ့ တိုင်း သေးလိုက်တာ ပန်းကန်ထဲမှာ ထည့်ပေးတာက နည်းလိုက်တာ ၀မှာမဟုတ်ဘူး လို့အမြဲ တွေးမိတယ်။
ခေါင်းစဉ်မှာ WeekEnd လို့ တပ်ထားပေမယ့် ဒီဇာတ်လမ်းတွေကို Weekend မှာ ကြည့်ဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ကြားရက်တွေမှာ အချိန်ရတယ်ဆိုမှ နည်းနည်းချင်း ကြည့်ဖြစ်တာ များတယ်။ တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းမှ ၇ မိနစ်၊ ၈ မိနစ်လောက်ကြာတာဆိုတော့ ကြည့်ချင်တဲ့အခါ အချိန်ရရင် ၁ ပိုင်း ၂ ပိုင်း ကြည့်လိုက်တယ်။ ဟိုးအရင်လို ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံး တစ်ထိုင်တည်းပြီးအောင် ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ် မဖြစ်ဘူး။ တခြားအရေးကြီးတာတွေကို ပုိုဦးစားပေးနေမယ်လေ။
Posted by Nay Nay Naing at 2/27/2010 11:44:00 PM3comments
♦ Cartoons : IT Security Awareness - Poison Letter
ဒီအီးမေးကို တွေ့ တော့ အင်တာနက် Wireless သုံးတယ်ဆို Secured ဖြစ်အောင် Password တွေ ဘာတွေ ထည့်ထားရဲ့လား မေးမိရင်၊ မလိုပါဘူး၊ အင်တာနက်ပဲ သုံးချင်တဲ့သူတွေ ၀င်ချိတ်သုံးကြပါစေ ဆိုပြီး အလှူပေးသလို ပြောလေ့ရှိသူတွေကို သတိရသွားတယ်။
Secure ဖြစ်အောင် လုပ်မထားတဲ့ ကိုယ့်အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ကို သူများဝင်သုံးရင် အင်တာနက်နှေး သွားတာလောက်ပဲ အလွန်ဆုံးဖြစ်နိုင်တယ် ထင်နေကြလို့ လား မသိဘူး။ တကယ်ဆို ဒီထက်မက ကိုယ့်ကို အန္တရာယ် ပေးနိုင်တာတွေ အများကြီး။
အရင်က ဒီမှာ Wireless ကွန်နက်ရှင်ယူဖို့ဖွင့်လိုက်ရင် Unsecured Network အတော်များများ တွေ့ ရလေ့ ရှိတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ အရင်ကလောက်များများ မတွေ့ ရတော့ပေမယ့် Unsecured Wireless Network တွေ တွေ့့နေရတုန်းပါပဲ။
Source : the Infocomm Development Authority of Singapore (IDA).
♦ Cartoons : IT Security Awareness - Be Careful
♦ Cartoons : IT Security Awareness - Ghost Writer!!
♦ Cartoons : IT Security Awareness - Backup your files!!
♦ Cartoons : IT Security Awareness - Power Down!
♦ Cartoons : IT Security Awareness
Posted by Nay Nay Naing at 2/25/2010 04:18:00 PM0comments
ဒီလိုလေး ရေးမှတ်ထားတော့ နောင်တချိန်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ ဈေးတွေ သိရတာပေါ့။ အဲဒီနေ့ က ဈေးဝယ်တာ အားလုံး GST ပါအပြီးမှာ S$30.65 ကျပါတယ်။ GST က 7% မပါဘူးဆို ကုန်ကျစာရိတ်က S$28.68။
China Cauliflower (S$2.13), Tomato (S$ 1.13), China BeijingCarbage (S$ 0.79)
Lemon (S$ 1.25), Garlic 500G (S$ 1.55), Old Ginger ( S$0.30)
Chicken Wings (S$4.50) , Minced Pork (S$ 2.45),
Grey Prawn (S$ 3.14), Fried Crisp (S$ 5.95)
ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ အထဲမှာ မပါတာက ဆန် နဲ့ကြက်ဥ။ ဆန်ဈေးတွေ အတော်တက်သွားမှန်း အဲဒီနေ့ဆန်ဝယ်ဖြစ်မှ သိလိုက်ရတယ်။ မ၀ယ်တာလည်း အနည်းဆုံး ၁ နှစ်ကျော်မကတော့ဘူး ထင်တယ်။ အမှတ်မမှားဘူးဆို ဟိုးအရင် ကျွန်မ ၀ယ်နေကြဆန်က 5KG တစ်ထုတ်ကို S$9 ကျော်လောက် ပေးရတယ်။ အခု ဆန်ဝယ်တော့ 2.5 KG တစ်ထုတ်ကို S$ 6.25 ပေးရတယ်။ အရင်ဆန်လောက်လည်း မကောင်းဘူး။ ကြက်ဥကတော့ ၁၀ လုံးကို S$ 1.25။ သစ်သီးနဲ့အအေး မ၀ယ်ဖြစ်ဘူး။ သည်နိုင်မယ် မထင်တော့ဘူးဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာသိတယ်။
တရုတ်နှစ်ကူး မတိုင်ခင် သောကြာနေ့(2010-02-10) က ၀ယ်ဖြစ်တာတွေပါ။ အလုပ်အပြန် NTUC တန်းသွားပြီး ၀ယ်လိုက်တာ၊ ပစ်စည်းတွေက လေး၊ ရာသီဥတုက ပူ၊ ၀တ်ထားတာကလည်း အနက်ရောင် အင်္ကျီလက်ရှည်၊ ချွေးအအေးမိသွားတယ် ထင်ပါရဲ့၊ နောက်နေ့ ကစပြီး နှာရည်တွေကျပြီး ဖျားတော့တာပဲ။ အရင်ထဲက အားနည်းနေတာလဲပါမယ် ထင်တယ်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ နဲ့အင်္ဂါ တရုတ်နှစ်ကူး ပိတ်ရက်တွေမှာ အစာ စားလိုက်၊ ဆေးသောက်လိုက် အိပ်လိုက် နဲ့အိမ်မှာပဲ အနားယူလိုက်တယ်။ အဖျားအကြီးလို့ဝယ်ထားတာလေးတွေ ချက်စားနိုင်တာ တော်ပါသေးတယ်။ မဟုတ်ရင် ဆိုင်တွေကပိတ်၊ ဘာမှစားစရာမရှိ နဲ့အတော်ဒုက်ခရောက်အုံးမယ်။
၀က်သားကို လုံးကြော်လိုက်တော့ ဒီလောက်ပဲရတယ်။
ပန်းဂေါ်ပွင့်တွေက သူငယ်ချင်းတွေကို သတိရလို့ဝယ်လာတာ။ လန်ဒန်မှာ ကျောင်းပိတ်ရက် သွားနေတဲ့ အချိန်က ညသန်းခေါင်းကျော် ဗိုက်ဆာတယ်ဆို ကိုဇာနည်က ပန်းပွင့်ကြော် ကျွေးလေ့ ရှိတယ်။ စားလို့ကောင်းမှကောင်း။ ကိုဇာနည် ချက်တာ အဓိက လုစားခဲ့တာ ကျွန်မ နဲ့LKH ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ တခါတလေ သားငယ်လည်း ပါမယ်။ မိကော်၊ စုစု နဲ့KKT ရောပါသလား။ ကျောင်းတတ်တုန်းက အကြောင်းတွေ စိတ်ကူးပေါ် အချိန်ရမှ သတိတရ ရေးမှတ်ထားရအုံးမယ်။
ဒီပုဇွန်ပန်းကန်ကိုတွေ့ ရင် တစ်စုံတစ်ယောက်ကတော့ နည်းနည်းလေး စားရတာ နံကြားတောင် ကပ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလာနိုင်တယ်။ ဒီတစ်ခေါက် ပုဇွန်က ၁၅ ကောင်လား မသိဘူး။ တစ်ပတ်ပဲ ရှိသေးတယ်၊ မေ့သွားပြီ။ ကျွန်မ အကျင့်ကလည်း တမျိုး၊ ဒီမှာ ပုဇွန်ဝယ်ရင် ထည့်တဲ့အချိန်မှာ အကောင် အရေအတွက် စိတ်ထဲက မှတ်ပြီး ၁၀၊ ၁၅၊ ၂၀ အဲလိုမျိုး နံပါတ်တွေ ကောက်ထည့်ဖြစ်တာ များတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 2/22/2010 10:29:00 PM5comments
25 Most Dangerous Programming Errors
Software Developement နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာ လုပ်ကိုင်နေသူတိုင်း ဖတ်သင့်ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 2/17/2010 01:38:00 PM3comments
OK 0122L ဆုိုတာ Look 122 ( ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့) လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်။
စိုင်းထီးဆိုင် ဆိုထားတဲ့ ဗားရှင်း ရမယ်ဆိုရင် လိုချင်တယ်။
OK 0122L - Sai Htee Saing
ဘီးနံပါတ် OK 0122 L
ပိုင်ရှင်ဟောင်းနှင့် ကွဲသွားတဲ့ ဘီးကလေးရယ်..
အသစ်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း အဟောင်းကိုတော့ မမေ့..
မင်းသခင်မလေးခမျာလေ သိပ်ကို စွဲလမ်းရှာတယ်
ပြန်ရွေးလို့ ရခဲ့ရင် ပြန်ရွေးလို့ ပေးလိုက်ချင်တယ်.
ဘီးနံပါတ် OK 0122L
ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် မိန်းမစီးဘီးတွေ့ တယ်ဆိုခဲ့ရင်
ငါတုို့ ဘီးလား အပြေးအလွှားပဲကြည့်မိတယ်
မင်းသခင်မလေးခမျာလေ စောင့်မျှော်မြဲစောင့်နေတယ်
ကြင်နာသူတောင် အစားထုိုးလုို့ မရဘူးရယ်..
မင်းသခင်မ အမျက်တော်ဟာ ငါ့အပေါ်ပဲကျလာမှာ..
Thanks to Ko M W Zaw for SHS version
Posted by Nay Nay Naing at 2/14/2010 08:50:00 PM3comments
Google Buzz 101
Buzz… Buzz… Buzz..
Google.. Google.. Google..
ဒီနေ့အဖို့နေရာတကာတွေ့ နေရတာ Buzz ပါပဲ။ တကယ်ဆို မနေ့ ကတည်းက စတယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။ ကိုယ်က အလုပ်မှာ ဆိုတော့ ညနေပိုင်းမှ တစ်ချက်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဒါလည်း ဖုန်းကနေပဲ သုံးလို့ ရတယ်။ Gmail မှာ ပေါ်မလာသေးဘူး။ ညနက်ပိုင်းတစ်ချက် email ၀င်စစ်တော့ ၀င်ဝင်ခြင်းမှာပဲ Buzzကို ရောက်သွားတာ တွေ့ လိုက်ရတယ်။ ဟိုကြည့်ဒီကြည့် နည်းနည်း ကြည့်ပြီး စိတ်ထဲ သဘော သိပ်မတွေ့ သေးတာနဲ့မနက်မှပဲ သေချာ စမ်းတော့မယ်ဆို ထားလိုက်တယ်။ဒီမနက် သေချာကြည့်မှာ Buzz ကို သုံးတာ Privacy အတွက် သိပ်မကောင်းတာ တွေ့ ရတယ်။ ဒါနဲ့စမ်းမသုံးခင်မှာ သေချာလုိုက်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အသစ်ဆိုတော့ စမ်းကြည့်ချင်တာပေါ့လေ။
Buzz ကို သုံးမယ်ဆို ပထမဆုံးအနေနဲ့Profile တစ်ခုအရင် ဆောက်ရတယ်။ မဟုတ်ရင် ဘာမှ တင်လို့ မရဘူး။ အဲ့ဒီလို လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ သတိမထားပဲ သူပေးထားတဲ့ Default setting အတိုင်းလုပ်လိုက်မယ်ဆို ကိုယ့်ရဲု့Post သမျှတွေ၊ ကိုယ်ဘယ်သူတွေကို Follow လုပ်နေတယ်၊ ကိုယ့်ကို ဘယ်သူတွေက Follow လုပ်တယ် ဆိုတာကို အဲဒီ ကတစ်ဆင့် လူတိုင်း မြင်နိုင်သွားလိမ့်မယ်။ Buzz မှာ Post လုပ်တဲ့ အခါ Private/Public လုပ်မယ်ဆိုတာ မြင်လွယ်တော့ တချို့အနေ နဲ့အဲလို လုပ်လို့ ရတယ် ဆိုတာ သိနိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ Profile ကနေ ကိုယ် Follow လုပ်သမျှလူတွေကို တခြားသူတွေ သိခွင့်ရသွားနိုင်တာကိုတော့ လူတိုင်း သတိထားမိချင်မှ သတိထားမိနိုင်တယ် ထင်ပါတယ်။ Profile က Public ဖြစ်နေအုံမယ်ဆို အင်တာနက်ပေါ်က လူတိုင်း ကြည့်လို့ ရသွားမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ပိုမကောင်းသေးတယ်။ ကိုယ်နဲ့ဘယ်သူတွေ အဆက်အသွယ်ရှိနေလဲ လူတိုင်းသိသွားမှာမျိုး ကျွန်မတော့ မကြိုက်ဘူး။ Google အနေနဲ့Profile မှာ Default Setting ကို Follow လုပ်သမျှ တခြားလူတွေ မြင်ခွင့်ပေးမယ်ဆုိုတာ မထားသင့်ဘူးလို့ ထင်တယ်။
ကိုယ်ရဲ့ Follow လုပ်တဲ့ Info တွေကို သူများတွေကို မမြင်စေချင်ဘူးဆို အောက်မှာလို default check လုပ်ထားတာလေးကို uncheck လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
Profile လုပ်တုန်းက Screen ယူထားလိုက်တာလေးတွေပါ။
Click "View all and Edit" and uncheck the box..
Public မှာ ဘယ်လိုတွေ မြင်နေရတယ်ဆိုတာ သိချင်ရင် ကိုယ့် List မှာရှိနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ Profile ကို ကြည့်လိုက်ပါ။ အခု အချိန်မှာ လူ အတော်များများရဲ့ တွေက Public ဖြစ်နေတာတွေ့ မိတယ်။
Profile လုပ်တုန်းက မသိလိုက်လို့မပြောင်းလိုက်ရလို့ကို သူများတွေ မမြင်အောင် ပိတ်ချင်တယ်ဆို Edit Profile မှာ သွားပြင်လုို့ ရပါတယ်။ အောက်ကပုံကို နှိပ်ပြီး အကြီးချဲ့ကြည့်ပါ။
Buzz ကို သဘောကျလို့သုံးမယ်ဆို ကိုယ်ရေးတာတွေ အင်တာနက်ပေါ်မှာ လူတိုင်းကြည့်နိုင်တယ် ဆိုတာမျိုး မဖြစ်အောင် သတိထားကြဖုို့ လိုပါတယ်။ Buzz မှာ Post လုပ်တဲ့ အခါ ဘယ်လို တင်မယ်ဆိုတာကို ဒီလိုမျိုးလေး ရွေးလို့ ရပါတယ်။
ကိုယ်မသိလိုက်လို့ကိုယ် Information တွေသူများတွေ သိသွားရတယ် ဆိုတာ မကောင်းဘူး။ ဒါတွေ အရေးမကြီးဘူး လူတွေသိလေ ပိုကောင်းလေ ဆိုရင်တော့လည်း ဒါတွေ ဂရုိုစိုက်နေစရာမလိုဘူးပေါ့လေ။
Buzz Buzz Buzz..
နောက်ပြီး အစက မသိလို့လူတိုင်းကို Follow လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်မိတယ်၊ ခု သိသွားပြီ၊ Follow လုပ်ခွင့်မပြုချင်တော့ဘူး ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း Block လုပ်လို့ ရပါတယ်။ Block လုပ်ချင်သူရဲ့ Profile ကိုသွားကြည့်လိုက်ရင် ဒါမျိုးလေးတွေ့ ရမယ်.... Block နှိပ်လိုက်ရင်ရပြီ...
လက်ရှိ Gmail မှာ Buzz က Default အနေနဲ့ပေါ်နေပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင် Buzz နေတယ်ဆိုတာ မျိုးပြပေးတယ်။
မသုံးချင်ဘူး၊ မကြိုက်လို့ဖြုတ်ထားချင်တယ် ဆိုလည်း အလွယ်တကူ ဖြုတ်ထားလုို့လုပ်ထားလို့ ရပါတယ်။ Gmail Page ရဲ့ အောက်ဆုံးမှာ Turn Off Buzz ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။
ခုတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ အနားယူဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။ လိုတာ ပိုတာ ထပ်သိတာ ရှိရင် နောက်မှပြင်တော့မယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 2/11/2010 03:36:00 PM6comments
ဟိုနေရာတွေ၊ ဒီနေရာတွေ့ တွေ့ နေတဲ့ အိုင်ပက် အကြောင်း တွေရင်း၊ စဉ်းစားရင်း ဟိုးငယ်ငယ်က အမေ မရှိတုန်း အိုင်ပက်ပြီး ငါးသွားဖမ်းလို့ဒဏ်ပေးခံရတာ သတိရသွားတယ်။
မိုးအကုန်၊ ဆောင်းအကုန်၊ နွေဦးပေါက် အချိန် အင်းအိုင်တွေ၊ ချောင်းတွေ မြောင်းတွေမှာ ရေတွေနည်းလာတဲ့ အခါ အိုက်ပက်ပြီး ငါးဖမ်း ၀မ်းစာရှာကြတယ် ဆိုတာမျိုး ကြားဖူးကြမှာပါ။ ကိုယ်တွေကတော့ ၀မ်းစာရှာတာ မဟုတ်ဘူး ဆော့တာ။ တကယ်တော့ မိုးအကုန်လောက်မှာ ခြံထဲမှာရှိတဲ့ ရေမြောင်းပိတ်ပြီး ငါးဖမ်းတိုင်းဆော့တာမျိုး။ အမေက ကျွန်မတို့ ကို အိမ်မှာထားခဲ့ရမယ်ဆို သူအပြင်မသွားခင် ဘာတွေ မလုပ်ရမှာတွေမျိုး သေချာမှာ သွားလေ့ရှိတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ငါးမဖမ်းရဘူးဆိုတာ ထိပ်ဆုံးက ပါတာပေါ့။ ဒါကို မောင်နှမ နှစ်ယောက် အမေ မရှိတုန်းလေး ဆိုပြီး မိုးဖွဲဖွဲလေးမှာ ဆင်းဖမ်းတာ၊ ပြန်လာတော့ ဒဏ်ပေးခံရတော့တာပဲ။ တခြားသူတွေဆော့တာ တွေ့ တော့ ကိုယ်တွေလည်း ဆော့ချင်တာပေါ့။
ငယ်ငယ် ၁ တန်း ၂ တန်းလောက်နေ ၆-၇ တန်းလောက်ထိ မိသားစုတွေ ဆွေမျိုးတွေ စုနေတဲ့ ခြံတခြံထဲမှာ ရှိတဲ့ အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ အောက်ထပ်မှာ ကျွန်မတို့မိသားစုက ငှါးနေခဲ့တယ်။ ခြံထဲမှာ အသက် သိပ်မကွာတဲ့ ရွယ်တူတွေ အများကြီးဆိုတော့ အားလပ်ရက်တွေဆို အားလုံး စုပြီးဆော့ကြတာ ပျော်စရာသိပ်ကောင်းတယ်။ ပြောရရင် အဲဒီခြံထဲမှာ ရေမြောင်းတွေ အတော်များများ ရှိတယ်။ အကြီးကြီးတွေ မဟုတ်ပါဘူး၊ ရေစီးအောင် အိမ်တွေဘေးပတ်လည်မှာ လုပ်ထားတာဆိုတော့ သိပ်လည်း မနက်ဘူး။ မိုးတွင်းဆိုရင်တော့ ကလေးတွေအတွက် ခါးလောက် ရှိမှာပေါ့။ အဲဒီနေရာက မြစ်နဲ့သိပ် မဝေးဘူး။ အရမ်းလည်း မနီးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်က ရေသွားရေလာ စနစ်တွေသိတဲ့ အတိုင်း မိုးရွာနည်းနည်း များပြီဆို ခြံထဲမှာ ရေတွေ တတ်လာရော။ မိုးတွင်းဆို မိုးရေတဖွေးဖွေးနဲ့နေခဲ့ရတာပေါ့။ တခါတလေ မိုးများရင် အိမ်ထဲတောင် ရေတွေဝင်တယ်။ အဲလို ရေတတ်တဲ့ အတွက် ငါးတွေလည်း ပါလာတယ်။ မြစ်ကလာတဲ့ ငါးတွေလား ရွံ့ တွင်းအောင်းနေရာက ထွက်လာတဲ့ ငါးတွေလားတော့ သေချာမသိဘူး။ မိုးမများတော့ဘူးဆို ခြံထဲမှာရှိတဲ့ ရေစပ်စပ် ကျန်ခဲ့တဲ့ မြောင်းတွေထဲဆင်း၊ပိတ် အိုင်တွေလုပ်ပြီး ငါးဖမ်းကြတယ်။ မှတ်မိသလောက် အဲဒီတုန်းက သူများတွေ ငါးဖမ်းရင် ဘာတွေ ရလဲဆို ငါးရံ့ ခေါင်းတိုတွေ နဲ့တလားဘီးယားတွေ။ ငါးရံ့ ခေါင်းရှည်တွေလည်း တခါတလေတွေ့ ရတယ် ထင်တယ်။ မြောင်းစပ်က တွင်းတွေမှာ ငါးရှဉ့် ဖမ်းတာလဲ တွေ့ ဖူးတယ်။ အမေက တခြားနည်းတွေ ကစားရင် ဘာမှမပြောပေမယ့် ငါးဖမ်းတာဆို လုံးဝမကြိုက်လို့မကစားရဘူး။ တကယ်ဆို ကလေးဆိုတော့ ငါးရအောင် ဖမ်းချင်တာ အဓိက မဟုတ်ဘူး ရွှံတွေထဲ ဆင်းဆော့ ချင်တာ အဓိက ဖြစ်မယ်။ ဒူးလောက်ရှိတဲ့ ရေတွေရွံတွေထဲဆင်းပြီး လက်ခုပ်ထဲမှာ လှုပ်နေတဲ့ ငါးတွေကို ခပ်ကြောက်ကြောက်နဲ့လိုက်ဖမ်းရတယ်ဆိုတဲ့ အရသာကိုမျိုး။ အဆူခံရတဲ့ နေ့ က ငါးဖမ်းလို့ ရလား၊ ရတယ်ဆို ဘယ်နှစ်ကောင် ဘယ်ငါးတွေရလဲ ဆိုတာတော့ မမှတ်မိတော့ပါ။ ငါးဖမ်းတဲ့အတွက် ဒဏ်ပေးခံရတယ် ဆိုတာတစ်ခုပဲ သတိရတယ်။
အတွေးထဲ ငယ်ငယ်ကအကြောင်း၊ မိုးရာသီ အကြောင်းဝင်လာပြန်တော့ အဲဒီခြံထဲမှာနေခဲ့စဉ် မိုးရာသီရောက်ပြီဆို သွားရလွယ်အောင် ချထားတဲ့ အုတ်နီခဲတွေ အကြားမှာ ဟောတစ်ကောင် ဟောတစ်ကောင် ဆိုသလို တွေ့ ရလေ့ရှိတဲ့ ရေမြွေ အ၀ါနဲ့အနက်ကြားလေးတွေကို သတိရသွားပြန်တယ်။ ငယ်ငယ်က ဆို မြွေတွေ့ လို့ လည်း မကြောက်ဘူး။ အမြဲနီးပါးတွေ့ နေကြဆိုတော့ ရိုးနေပြီ။ ရေမြွေဆိုတာ အဆိပ်မရှိဘူး ပြောတာပဲ။ အဆိပ်ရှိတဲ့ မြွေတွေကတော့ တွေ့ ရခဲ ပါတယ်။ လုံးဝ မတွေ့ ခဲ့ဘူးတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ မြွေပွေး၊ မြွေဟောက်တွေလည်း တွေ့ ဖူးတယ်။ တခါတလေလည်း မြွေ ကပြားလေးတွေကို တွေ့ ရတယ်။ မြွေသံချိတ်ဆိုလား မဲနက်နက် ခေါင်းပြားပြားနဲ့ မြွေတွေလည်း တွေ့ ရတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက တခြားမြွေတွေကို ကြောက်စိတ်မပေါ်ဘူး။ ခြေထောက်ကို ခုနှစ်ပတ် ပတ်မိတာနဲ့ သေတတ်တယ် ဆိုတဲ့ မြွေကိုတော့ လန့် တယ်။ တွေ့ ဖူးလားဆိုတော့ မတွေ့ ဖူးဘူး၊ တကယ်ရှိ မရှိတောင် မသိဘူး။ သူများအပြော၊ ကိုယ့်အတွေးနဲ့လန့် တာ။ ထူးဆန်းတယ်။ အခုရော ဘာလန့် လဲဆို ကိုယ့်လာ မကိုက်သ၍ ဘာကောင်မှ မလန့် ဘူးလို့ ပြောရမယ်။ အခု လက်ရှိ ကိုယ်နေတဲ့ နေရာတွေမှာက မြွေဆိုတာမျိုးကို တွေ့ ချင်တိုင်း လွယ်လွယ်ကူကူ တွေ့ ရတာ မဟုတ်ဘူး။ အချိန်ကုန်ခံ ပိုက်ဆံပေးသွားကြည့်ပါမှ တွေ့ နိုင်တာမျိုးလည်း ဖြစ်နေတယ်။ စားမယ်ဆို ပိုဈေးကြီးသေးတယ်။ အင်း... အသက်တွေ ကြီးလာလေလေ ဟိုးငယ်ငယ်ကဆိုပြီး သတိရစရာ၊ ပြန်ပြောင်း အောက်မေ့စရာတွေ များလေလေဆိုတာ သိပ်မှန်တာပဲ။ သိပ်မတွေးပဲနေမှ။
အင်တာနက်ပေါ်မှာ တွေ့ ရသမျှ အိုင်ပက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေ ထဲမှာ ပန်းသီးရဲ့ အိုင်ပက်အပေါ် ဟစ်တလာ ဘယ်လိုတုန့် ပြန်တယ် ဆိုတာကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ အမူအရာနဲ့စာတွေက ကွတ်တိပဲ။ ရယ်ရတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 2/10/2010 04:53:00 PM4comments
Which generation do you belong in?
Jonathan Reed's - Lost Generation from Rock Church
And all of this will come true unless we choose to reverse it .
Posted by Nay Nay Naing at 2/08/2010 12:40:00 AM2comments
ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ ။ ဒါပေမယ့် အလုပ်လာရတယ်။ ၂၀၁၀ အတွင်း ပထမဆုံး အလုပ်လာရသော တနင်္ဂနွေနေ့ပါ။ အလုပ်ကို ၁၀ နာရီလောက် ရောက်တယ်။ ၂ နာရီလောက်မှာ ကိုယ့်အပိုင်းတွေ Test လုပ်တာ ပြီးသွားတယ်။ ကြီးကြီးမားမား ပြဿနာ မရှိဘူး။ မိုင်တာနာ ဒေတာတစ်ခု တစ်နေရာမှာ မပြတာ တွေ့ တယ်ဆိုလို့တစ်ချက် ပြင်လိုက်ရတယ်။ မြန်ပါတယ်။ အားလုံး ပြင်တာ စမ်းတာမှ ၅ မိနစ် လောက်ပဲ ကြာတယ်။ တစ်ခြား တစ်ယောက်ရေးတဲ့ အပိုင်းမှာလဲ မိုင်နာအယ်ရာ ၂ ခုတွေ့ တယ်လို့ပြောတယ်။ တကယ်ဆို ဒါတွေကို UAT မှာ ကတည်းက တွေ့ သင့်တယ် ဆိုပေမယ့် ကိုယ်တွေအချိန်လု လုပ်ရသလို ၊ သူတို့ တွေလည်း အချိန်သိပ်မရတာ သိတယ်ဆိုတော့ နားလည်ပေးလိုက်ကြ ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆို ဒီလို အချိန်မှာမှ ရှာတွေ့ တဲ့ အယ်ရာကို ကြီးကြီးမားမား ပြဿနာမဟုတ်ရင် ပြင်ပေးလေ့ မရှိဘူး။
တခြားသူတွေ အပိုင်းတွေ Test လုပ်နေတာ မပြီးသေးလို့မပြန်ရသေးဘူး။ User တွေစီက အားလုံး အဆင်ပြေတယ်ဆိုမှ ပြန်လို့ ရမယ်။ ၂ လကျော် ၃ လ နီးပါး စိတ်ပန်းလူပန်း ဖြစ်နေစေတဲ့ အလုပ်တစ်ခုပြီး သွားပြီဆိုတော့ စိတ်ချမ်းသာသွားတယ်။ အခု အီးမေး ပြန်စရာရှိတာလေးတွေ ပြန်ရင်း၊ တချက်တစ်ချက် ဖေ့ဘုတ်ဝင်ပြီး ဂိမ်းဆော့နေတယ်။ တနင်္ဂနွေမို့ လားမသိဘူး အလုပ်က အင်တာနက်က သိသိသာသာ မြန်နေတယ်။ ဂိမ်းဆိုလို့တခြားဂိမ်းတွေ မဆော့နိုင်ပါဘူး။ Wall ပေါ်မှာ ပေါ်လာတဲ့ PS က သူများပေးတဲ့ နှင်းဆီးပန်းလေးတွေ ၀င်ဝင်ယူတာပါ။ ၁၂ ရောင်ရှိတယ် ပြောထားတာ၊ ရောင်စုံ အကုန်မရသေးဘူး။ ၁၀ မျိုးပဲ ရသေးတယ်။
ဒီနေ့ဘယ်အချိန်ပြန်လို့ရမလဲ မပြောနိုင်သေးဘူး။ သိပ်တော့ ကြာမယ် မထင်ဘူး။ ကြာလည်း ကိစ္စ မရှိပါဘူး။ ကိုယ့်အပိုင်းတွေ ပြီးသွားပြီဆိုတော့ စိတ်ပူစရာလည်း မရှိ၊ လုပ်စရာရှိတာလေးတွေ လုပ်ရင်း ဂိမ်းလေးဆော့လိုက် ဟိုဖတ်ဒီဖတ်လုပ်လိုက်နဲ့ ပဲ ပြန်ရမယ့် အချိန်စောင့်နေလိုက်တော့မယ်။ အေးအေးဆေးဆေး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းပါပဲ။
Posted by Nay Nay Naing at 2/07/2010 03:20:00 PM5comments
To Have Fun in Pet Society
Pet Society Game (FaceBook) က ပုံတွေပါ။ အဲဒီ အထဲက Items တွေ Shops မှာ တရားဝင် မရောင်းသေးပါဘူး။ လာမယ့် တနင်္လာ (8th-Feb-2010) မှ ရောင်းမှာ။ အသစ်လေးတွေက လည်းဖြစ်ပြန် လှလည်းလှဆိုတော့ PS ဆော့တဲ့သူတွေ မြင်အောင် ဒီနေရာမှာ ကြွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေရထားတာ ၂ ရက်လောက်နေပြီ၊ ဒီနေ့ မှပဲ ကြွားအားတော့တယ်။ ;)
Love, Be Mine, I Love You!
အချိန်သိပ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် အခန်းတွေ လှအောင် မပြင်နိုင်ဘူး။ အရင်နှစ်က အရုပ်တွေ၊ ပစ္စည်းတွေနဲ့တောင် အခန်းမဆင်အားဘူး။ ဒီနှစ်အတွက် အသစ်ထွက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကလည်း များတယ်။ ထွက်သမျှ အသစ် အကုန်ပါအောင် စိတ်ကူးတည့်သလို ကြိုးစားထည့်ပြီး လူများမြင်အောင် ပြလိုက်ပါတယ်။ (ပစ္စည်းတွေများ နေတယ်။ မလှဘူးပြော မှာစိုးလို့ကြိုကန်ထားတာပါ။)
Red.. Red.. Red..
အလုပ်တွေများ မအားတဲ့ကြားက ဒီလို အချိန်မရမက ယူပြီးကြွားနိုင်တဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချီးကျူးပါတယ်။ တဆက်တည်း သူများ PS က အကောင်လေးနဲ့ဆက်ကြွားပါမယ်။
အန်တီထက်ထက် ရဲ့ မိကျားလေး..
အန်တီနေနေလက်ဆောင် အင်္ကျီအသစ်လေး နဲ့လှနေသူလေးမိကျား
မိကျားရဲ့ နောက်ဆုံး အလှဆင်ထားတဲ့ အခန်း
(Room with full of love and joy)
မိကျားက အတော် ချမ်းသာတယ်။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေအများကြီးနဲ့အခန်းတွေလည်း အများကြီး ပိုင်တယ်။ ချစ်သူခင်သူပေါတဲ့ မိကျားက အန်တီသက်စုဆီက လက်ဆောင်လေးလည်း ရထားသေးတယ်။ အဲဒီ လက်ဆောင်က ၁၄ ရက်နေ့ မှ ဖွင့်လို့ ရမယ်တဲ့။ PS မှာ ဒါမျိုးလေးတွေကလည်း ရှိပါတယ်။ ဘာလေးရမလဲ သိချင်လို့လက်ဆောင်ထုတ်ဖွင့်ရရင် ကြွားပါအုံးလို့မိကျားကို သေချာမှာထားတယ်။ ;)
မိကျားနဲ့ အတူ ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံထားတာ။ :D
X'mas at Pet Society
Posted by Nay Nay Naing at 2/04/2010 02:49:00 PM2comments
♦ Cartoons : IT Security Awareness - Poison Letter...